Shiinaha Z-LION Sagxadaha dahaadhida dheemanka khafiifka ah ee midabka leh ee loogu talagalay soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha |Dheemanka ZL
Dhexroorka:4 ", 5"
Isticmaalka:Naaxinta qoyan iyo qalalan
Gariir:50# 100# 200# 400# 800# 1500# 3000#
Cabbirrada ugu caansan waa 4 "iyo 5".
50# 100# 200# 400# 800# 1500# 3000#.Nambarada hoose waa dagaal badan halka kuwa sare ee nambarada leh ay keenaan dhalaal iyo cad.
Iyada oo leh 3mm oo dheeman ah oo shaqeynaya, suufku wuxuu leeyahay nolol ku filan.
Hook & loop-ka-taageeridda, taageeridda summada midabka waxay ogolaataa aqoonsi fudud.
4" pads waxaa inta badan lagu isticmaalaa mishiinnada dhalaalaysa ee ka dambeeya socodka khafiifka ah ka dib isticmaalka curaarta birta ahqalabka dheemansagxadda shubka ah ee dhalaalaysa.5" suufka waxaa inta badan loo isticmaalaa suufiyada gacanta lagu hayo ee cidhifyada, geesaha iyo meelaha kale ee leh meel bannaan oo kooban oo Furimaha Dagaalka uusan gaari karin.
Dabacsanaanta suufkan ayaa ah mid la dareemi karo, taasoo siinaysa hawlwadeenka si fudud ugu shaqaynta geesaha cidhiidhiga ah.
Xabagta midabka fudud leh suufku waa qalab aad u fiican oo lagu nafiso wareejinta resinka.
Suufyadu waxay ku shaqayn karaan biyo ama biyo la'aan.
Z-LION 123AW suuf dheeman midab leh oo iftiin leh ayaa loo isticmaali karaa labadaba qoyan iyo kuwa qalalan.Warshadaha sagxada sagxada shubka ah, waxa si balaadhan loogu isticmaalaa mishiinnada dhalaalaynta lugaha ee fudfudud si ay u dhalaaliyaan sagxadda ama kuwa gacmaha lagu xidho ee shaqada cidhifka ah.Astaamaha gaarka ah ee midabkan iftiinka ahsuuf dheeman ahwaa kuwan:
Midab khafiif ah oo aan midab lahayn, oo dhalaalaysa iyada oo aan la wasakhayn dhulka.
Dabacsanaan heer sare ah ayaa u oggolaanaysa suufka inuu si fiican u raaco jaan-goynta dusha sare ee sagxadda.
Naqshad toosan ayaa u oggolaanaysa suufku inuu u shaqeeyo labada dhinac ee wareega saacadda iyo saacadda ka soo horjeeda, sidoo kale wuxuu bixiyaa marin heersare ah oo loogu talagalay slurry ama boodhka.
Si dhakhso leh ayuu u shaqeeyaa oo hufan, wuxuu u oggolaanayaa isticmaaluhu inuu gaaro heer dhalaalaya oo dhowr tallaabo ah, wuxuu badbaadiyaa waqti iyo kharash sidoo kale wuxuu keenaa natiijada ugu dambeysa ee wanaagsan.
Heerarka gabaabsiga hoose wuxuu bixiyaa adkeysiga dheer, wuxuu badbaadiyaa kharashka qalabaynta wuxuuna keenayaa qiimo hoose halkii mitir laba jibaaran.
Xabagta tayada sare leh waxay u dulqaadanaysaa qooynta biyaha iyo kulaylka sarreeya taasoo ka dhigaysa suufka mid waara si loo nadiifiyo qoyan iyo qalalan labadaba.
Qaabka No. ZL-123AW
Dhexroorka 4 ", 5"
In warshadaha polishing sagxada shubka ah,suufka dhalaalaya ee dabacsanwaxa loo isticmaali karaa mishiinnada dhalaalaysa ee daba socda ee fufud si aad sagxada u dhalaaliso ama kuwa gacanta lagu xidho ee shaqada cidhifka ah.Xabagta midabka khafiifka ah waxay ku habboon tahay in la yareeyo wareejinta resinka.Waxaa loo isticmaali karaa labadaba qoyan iyo qalalan.
Nashqada dhibicda suufka suufka ee qallalan ee la taaban karo
suufka dheemanka dhalaalaysa ee xabagta sunflower
Qaabka Turbo suufka dheemanka dhalaalka ah ee qallalan ee resin f...
Qurxinta rinjiga qalalan ee quruxda badan ee dhalaalaya
Qaabka duufaanta qalalan ee resin polishing pad for con...